Xayiraado Visa oo la saaray hogaamiyayaasha aan Dimoqraadiga aheyn ee Nicaragua
Nicaragua Social Security Angst
Tani waa faallo ka tarjumeysa aragtida dowladda Maraykanka
Waaxda Arrimaha Dibaddu waxay qaadday tallaabo ay xariyaad xagga fiisaha ah ugu soo rogtay 100 xubnood oo ka tirsan Golaha Qaranka Nicaragua iyo nidaamka garsoorka Nicaragua, oo ay ku jiraan xeer-ilaaliyeyaasha iyo garsoorayaasha, iyo sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha qoyskooda. Waaxdu waxay la noqotay dhammaan fiisooyinkii Maraykanka ee ay haysteen shaqsiyaadkan.
Siyaasadda xaddidaadda fiisaha ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxay quseysaa shakhsiyaadka la rumeysan yahay inay mas'uul ka yihiin, ama ku lug leeyihiin, wiiqidda dimoqraadiyadda, oo ay ku jirto ku xadgudubka xuquuqda aadanaha.
Siyaasaddu waxay kaloo khuseysaa xubnaha qoyska ee dadkaas oo kale ah. Ficilladii ugu dambeeyay ee la qaaday si loogu soo rogo xayiraad fiiso dadka reer Nicaragua ayaa ka dhashay weerarradii taliska Ortega-Murillo uu ku qaaday dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha.
Weerarradan waxaa ka mid ah xarigga 26 qof oo mucaarad siyaasadeed ah iyo shaqsiyaad u ololeeya dimuqraadiyadda, oo ay ku jiraan lix murashax oo u tartamaya madaxtinimada, dadka u ololeeya ardayda, hoggaamiyeyaasha qaybaha gaarka ah, iyo xubno kale oo siyaasadeed; iyo ansixinta sharciyada caburinta ah ee u adeegay inay xaddidaan oo dembi ka dhigaan hadallo aan qeexnayn, diidmo, iyo ka qaybgal siyaasadeed.
Xayiraadaha fiisaha ayaa sidoo kale loogu talagalay kuwa doonaya inay dhibaateeyaan oo aamusiyaan bulshada rayidka ah iyo warbaahinta madaxa bannaan, iyo kuwa wax u dhimaya hay'adaha dimuqraadiyadda iyo hannaanka Nicaragua.
Iyada oo laga duulayo “ololahan argagaxisada,” ayaa sida uu afhayeenka Waaxda Arrimaha Dibedda Ned Price ku tilmaamay, doorashooyinka soo socda ee November uma badna inay u dhici doonaan si xor ah ama xalaal ah.
Xoghayaha Arrimaha Dibedda Antony Blinken ayaa yiri, “Kala noqoshada fiisaha waxay muujineysaa in Mareykanku uu kor u qaadi doono la xisaabtanka hoggaamiyeyaasha taliska oo keliya maahee uu laakiin sidoo kale la xisaabtamayo mas'uuliyiinta awood u siiya weerarrada taliska uu ku hayo dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha.
Mareykanka wuxuu sii wadi doonaa inuu adeegsado agabyada diblomaasiyadeed iyo dhaqaale ee aan awoodno si aan ugu riixno sii deynta maxaabiista siyaasadeed iyo inay taageerto baaqyada dadka Nicaragua ee ku aaddan xorriyad ballaaran, la xisaabtan, iyo doorashooyin xor iyo xalaal ah.”